Mpialokaloka ao Etazonia Mamelona Hira Nentin-drazana Amin’ny Alalan’ny Hiran’Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Mpialokaloka ao Etazonia Mamelona Hira Nentin-drazana Amin'ny Alalan'ny Hiran'Ankizy
Voadika ny 14 Desambra 2016 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, 日本語, Swahili, English
Marta Sam mihira miaraka amin'ny mpianatra efa-taona. Sary: Erika Beras
Ity lahatsoratra nosoratan'i Erika Beras ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 5 Desambra 2016. Navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Voahodidin'ireo ankizy efa-taona mavitrika indrindra i Marta Sam. Ao amin'ny Day Care, St Martin ao Erie, Pennsylvania, mitarika ny ankizy mihira sy mandihy.
Mihira amin'ny teny Arabo i Sam, ary avy eo amin'ny Anglisy. Mandray ireo mpianatra amin'ny alalan'ny hira Kongoley izy, arahin'ny “Five Little Monkeys Jumping On The Bed (Gidro dimy kely mitsambinika eo ambon'ny fandriana).” Manaraka ny toromarika ataony ny ankizy, mandihy sy miantsoantso ny hira ankafizin'izy ireo. Efa zavatra mahazatra an'i Sam izany.
“Rehefa mahita ahy ao an-dakilasy izy ireo dia miteny hoe: ‘Metiresy Marta, afaka mihira ity ve isika? Metiresy Marta afaka mihira ity ve isika? Metiresy Marta, afaka mitsambikina ve isika'”, namaly izy hoe ” Eny, Hitsambikina miaraka amin'izy ireo aho ary hisary adala tahaka azy ireo – mahatonga anao hanetry tena hitovy amin'ny ankizy ny miara-miasa amin'izy ireo… sy ny miaraka amin'izy ireo “.
Mpampianatra tsy maharitra ao amin'ny Day Care, St Martin i Sam, 59 taona. Mivezivezy isaky ny efitra izy ary mihira hira fandrotsirotsiana zaza manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny ankizy. Avy any Sodana Atsimo izy ary tonga tao Erie, 13 taona lasa izay, ary anisan'ny andiany voalohany tamin'ireo mpitady fialokalofana an'arivony nanorim-ponenana tao amin'ity tanàna kely iray ao Rust Belt [tehezan'harafesenina] ity.
Niasa tamina orinasa momba ny plastika izy ary nanomboka nianatra teny Anglisy. Nandre izy fa mety hahazo fanofanana arak'asa hiasana any amin'ireo akanin-jaza na fikarakarana zokiolona. Ho setrin'izany dia nihira ireo hira nentim-paharazana nohirainy ho an-janany tamin'izy ireo mbola ankizy izy.
Izany indrindra no tena notadiaviny.
“Oh, nanova betsaka ny fiainako izany. … Olona aho izao, “hoy izy.
Miasa ao St. Martin i Sam hanao ny Hira Fahiny, Fanararaotra Vaovao, fandaharan'asa nofinofisi'i Kelly Armor: mpikanto ny hiram-bahoaka sady mpanabe ao amin'ny Mozea Ara-java-kanton'i Erie, saingy nandany fotoana tamin'ny fianarana hira nentim-paharazana tao Kenya sy Tanzania tamin'ny taompolo 1980. Raha tsikariny ny fisian'ireo mpitady fialokalofana tao Erie taona vitsivitsy lasa izy, dia nisy hevitra nitsiry tao aminy.
“Mety hoe … misy vehivavy mpitady fialokalofana, te hi-hikarakara ankizy kely ao? Ary mety hoe mahafantatra hira betsaka izy ireo ary mahafantatra ny fomba fampiasàna ny hira amin'ny ankizy? “Hoy izy nanontany tena.
Hita tokoa fa izay no nisy, ary indraindray hira novidian'izy ireo tany Etazonia avokoa izy rehetra. Izany no nitranga tamin'i Victoria Angelo, izay avy any Sodana Atsimo ihany koa.
“Tsy afaka nitondra na inona na inona aho. Tsy misy lovia, tsinotsinona, tsy misy [fitafiana], “hoy izy. “Hira no mba nentiko niaraka tamiko.”
Amin'ny lafiny sasany, maneho ny zava-drehetra alahelovana [mahamanina] ny hira.
“Fanehoana fotsiny ny fihetseham-pontsika, ny hafaliantsika, ny alahelontsika ary ny ady mitranga, milaza vanim-potoana rehefa misy orambe, sy rehefa misy hain-tany ny hira,” hoy izy.
Victoria Angelo miaraka amin'ireo ankizy kely iasany. Sary: Erika Beras
Nahazo famatsiam-bola hampiofanana ny vehivavy tahaka an'i Angelo sy i Sam i Armor, mpihiram-bahoaka, ahazoan'izy ireo asa fikarakarana ankizy. Avy eo, tahaka ny efa nataony tany Afrika, nanangona sy nandika hira izy.
Tena nahomby tokoa ny fampiarhaana ny fampiofanana arak'asa sy ny hira nentim-paharana ka nahatonga ny mozea namoaka kapila mangilatra. Mihira ny sasany amin'ireo hiran'ny vahoaka Acholi rehefa misy zazakjely iray manomboka i Angelo , tahaka ny iray avy amin'ny olona Acholi izay nohiraina raha vao manomboka mamindra ny zazakely iray.
“Fomba iray hiantsoana ny ankizy hamindra mankeny aminao izany ary avy eo ianao mihira ho an'izany ankizy izany mba hiasany dia manodidina ary avy eo misy olon-kafa mihira ho an'izany zaza izany”, hoy ny Armor.
Avy any ampitan-dranomasina ny sasany amin'ireo hiran'ankizy malaza indrindra any Etazonia – ohatra ny “London Bridge is Falling Down (Mianjera ny Tetezan'i Londra” na “Ring Around the Rosie.” Saingy manana ireo karazan-kira ireo ny firenena sy ny kolontsaina tsirairay, ary noho ny fifindra-monina sy ny fandraisana ny fomba'ireo olona andehanana, dia mety ho very ireny – na voatahiry.
Nitahiry hira efa ho an-jatony saika avy amin'ny firenena sy ny kolontsaina marobe ny Armor. Momba ny zava-drehetra avokoa izy ireo – biby, fihetseham-po, fiainana nandalovana.
Hira Nepaley iray ohatra mikasika ny fianihana hazo manga amin'ny fotoana fahamasahan'ilay voankazo mandritra ny fotoana fakan-drivotra .
“Saingy amin'ny faran'ny hira, maneno ny lakolosy ary tsy azo ny manga,” hoy izy. “heverina ho karazana fahamarinana mandrakizay, any amin'izay alehanao izany. Tsy ho ampy mandrakizay ny fakan-drivotra. Ary indraindray tsy manam-potoana hihinanana izany manga izany ianao.”
Indreto hira nofantenina avy amin'ny kapila-mangilatra “Simba La La: Mozika Manerantany ho an'ny Ankizy,” avy amin'ny Mozean'i Erie Ara-java-kanto.
Momba ny lalimanga, bibikely hita tao Azia Atsimo ity hira ity. Mamaritra amim-pitiavana ny lalitra ny hira ary milaza fa tsara kokoa raha any ivelany ny lalitra:
Rehera mihira azy ity ny ankizy Kongoley, dia mitehaka ankavia sy ankavanan'ny lohany:
Mitovy amin'ny hiran'ankizy Amerikana mahazatra “I’m A Little Teapot (Fasiana Dité kely aho)” ity hira ity.
Mampiasa ireo toerana ao Erie fantatry ny ankizy ny dika amin'ny teny Anglisy amin'ity hira ity.